समाचार - USB पावर डेलिभरी भनेको के हो?
यद्यपि कम्प्याटिबिलिटीको मुद्दा युएसबी पावर डेलिभरी विशिष्टताको परिचयको साथ विगतको कुरा हुनेछ। USB पावर डेलिभरी (वा पीडी, छोटोका लागि) एकल चार्ज मानक हो जुन यूएसबी उपकरणहरूमा सबै प्रयोग गर्न सकिन्छ। सामान्यतया, USB द्वारा चार्ज गरिएको प्रत्येक उपकरणको आफ्नै अलग एडाप्टर हुनेछ, तर अब होइन। एक सार्वभौमिक USB PD विभिन्न उपकरणहरूको एक विस्तृत विविधता पावर सक्षम हुनेछ।
USB पावर डेलिभरीको तीन महान सुविधाहरू?
त्यसोभए अब तपाईंलाई USB पावर डेलिभरी मानक के हो भन्ने बारे केही थाहा छ, के ठूला सुविधाहरू के हुन् जसले यसलाई सार्थक बनाउँदछ? सब भन्दा ठूलो आकर्षण भनेको यूएसबी पावर डेलिभरीले मानक पावर स्तर १०० डब्लुसम्म बढायो। यसको मतलब तपाईंको उपकरणले पहिले भन्दा धेरै छिटो चार्ज गर्न सक्षम हुनेछ। साथै, यसले प्रायः उपकरणहरूको लागि काम गर्दछ र निन्टेन्डो स्विच प्रयोगकर्ताहरूका लागि उत्कृष्ट हुनेछ, किनकि यसका बारे चर्को उजुरी सुस्त चार्ज हुँदै आएको छ।
USB PD को अर्को ठूलो सुविधा भनेको तथ्य यो हो कि पावर दिशा अब निश्चित गरिएको छैन। विगतमा, यदि तपाईंले कम्प्युटरमा तपाईंको फोन प्लग गर्नुभयो भने, यसले तपाईंको फोन चार्ज गर्दछ। तर पावर डेलिभरीको साथ, तपाईंले प्लग गर्नु भएको फोन तपाईंको हार्ड ड्राइभलाई उर्जा दिन जिम्मेवार हुन सक्छ।
पावर डेलिभरीले पनि सुनिश्चित गर्दछ कि उपकरणहरू ओन्चार्ज हुँदैनन् र केवल आवश्यक मात्राको रस प्रदान गर्दछ। जबकि धेरै स्मार्ट फोनहरूले थपिएको शक्तिको फाइदा लिन सक्षम हुने छैनन्, अन्य धेरै यन्त्रहरू र कम्प्युटरहरू सक्षम हुनेछन्।
शक्ति डेलिभरी - भविष्य उद्धार गर्दै
अन्तमा, USB चार्जिंगको लागि यो नयाँ मानकले टेक्नोलोजीको विश्वलाई परिवर्तन गर्न सक्छ जुन हामीलाई थाहा छ। पावर डेलिभरीको साथ, उपकरणहरूको दायराले एक अर्कासँग आफ्ना चार्जहरू साझेदारी गर्न सक्दछ र एक अर्कोलाई कुनै समस्या बिना पावर गर्न सक्छ। पावर डेलिभरी मात्र एक धेरै सजिलो र एक सुव्यवस्थित तरीका छ तपाइँको सबै उपकरणहरूको चार्जिंग को बारे मा जान।
हाम्रो फोन र उपकरणहरूले अधिक र अधिक शक्ति प्रयोग गर्न जारी राख्दै, USB पावर डेलिभरी अधिक र अधिक सामान्य हुन सक्ने छ। पावर बैंकहरूसँग पनि अब USB पीडी छ चार्ज गर्न वा उपकरणहरू सञ्चालन गर्न जुन धेरै पावर माग गर्दछ (म्याकबुकहरू, स्विचहरू, गोप्रस, ड्रोनहरू र अधिक सोच्नुहोस्)। हामी निश्चित रूपमा भविष्यको प्रतीक्षा गरिरहेका छौं जहाँ शक्ति बाँड्न सकिन्छ।